लक्ष्मी समान हुन्छन् यी १० गुण भएका नारीहरु, भित्र्याउँछन् परिवारमा खुसी नै खुसी – Khabar Silo
१. मिठो बोली बचन, मधुर आवाज, हरेक क्षण मायालु व्यवहार दर्शाउँछन् ।
२.जुन नारीमा सेवा भाव, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमानी, दयाभाव, कर्तव्य निष्ठ हुने गर्छन् ।
३.जुन नारी तनले हैन मनले सुन्दर रहेकी छन् ।
४.जुन महिला घरमा आएका पाहुनलाई हार्दिकताको साथ घरमा स्वागत सत्कार गर्छिन् ।
५.अरुको दुखमा आफ्नो दुख सम्झेर दुख बाट मुक्ति पाउँदा आफुलाई आनन्द भएको अनूभूत गर्ने नारी ।
६. आफ्नो घरका सबै सदस्यबाट उत्तिकै रुपमा श्रद्धा, प्रेम सम्मान पाएका नारी । जो सबैसँग मिठो बोल्ने, स्वास्थकर खाना खुवाउने गर्छिन् ।
७.जो हरेक दिन स्नान गरेर स्वच्छ सफा र स्वच्छ वस्त्र लगाउने गर्छिन् ।
८.जुन नारी घरलाई शान्तिमय बनाउन हरेक दिन बिहान बेलुका पुजा आज गर्छिन्, दीप बालेर घरलाई सुगन्धित र बास्नामय बनाउँछिन् ।
९.जो पतिव्रतको पालना गर्छिन् ।
१०.आफ्नो घरमा धर्म र नितिको मार्गमा हिड्न सबैलाई प्रेरित गर्छिन् ।
हिन्दु धर्मवालम्वीहरुका लागि गीताको विशेष महत्व रहन्छ । उनीहरु गीताको पाठ गर्ने मात्र नभइ श्रद्धा भक्तका साथ पूजा आरधाना पनि गर्ने गर्दछन् । यहाँ श्रीमद् भागवत गीताका अनमोल वचनहरु उल्लेख गरिएको छ जुन भनाइ तपाईंको जीवनका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् । – शंका गर्ने व्यक्तिको लागि न त यस संसारमा शान्ति मिल्छ न त […]